उदारीकरण दिवस मनाउने? के तपाईं जान्नुहुन्छ के तपाइँ जान्नुहुन्छ? मार्टिन भिजल्याण्ड
तपाईं आज लिबरेशन दिन मनाउन गएर र तपाईं त नाजीहरूले यो वास्तवमा मामला छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न प्रयास फेरि लिन देखि नेदरल्यान्ड्स liberated थियो celebrates लाग्छ भने। वेबसाइटमा Truthseeker1313.com इतिहासको पूर्ण भिन्न दृश्य हो हामी मुख्य स्ट्रीम शिक्षामा जान्छौं। अब हामी पाठ्यक्रमका वेबसाइटहरू र वेबसाइटहरूको नामक 'डेबर्नर' जान्दछौं। यस्ता साइटहरू जस्तै रहस्यमय सेवाहरू जस्तै वेबसाइटहरू जसले मार्टिन व्रिजल्याण्डलाई आक्रमण गर्दछ र अपमानजनक र निन्दाको साथ काम गर्न खोज्छ। तथापि, उल्लिखित वेबसाइटबाट जानकारी धेरै किताबहरूसँग मेल खान्छ र नाजी जर्मनीको उत्पत्तिको एक उत्कृष्ट पढ्न योग्य (अंग्रेजी) सारांश नाजुक को निरन्तरता गर्न।
शब्द "नाजी" र "नाजीवाद" मुख मा राखिएको छ जब कान मा धेरै मानिसहरूको औंला अहिले जाने, तर म बस आज को संकेत हेर्न हेर्न तपाईं सोध्नु थियो। के तपाइँ यस धारणा छ कि हालको 3D रेखाचित्र संकुलसँग आर्किटेक्टहरूले भवनको शीर्ष हेराइ उत्पादन गर्न सक्षम छैनन्? कसरी यो हुन सक्छ कि अमेरिकी नौसेना मुहरहरु (अमेरिका को कुलीन सेनाहरु) एक कार्यालय स्वास्टा को प्रतिनिधित्व गर्दछ? ब्रसेल्समा नयाँ नाटो मुख्यालयको वास्तुकार किन सोचेनन् कि उनीहरूको बुबा भनिन्छ चार interlocking अनुहारहरू कहिलेकाहीं हेड अफिस जस्तो एसएस संकेतहरू लाग्न सक्छ? एकले मात्र अनुवाद गर्न सक्दछ कि चार S-and को रूपमा Sedes Sacrorum Schutzen Staffel,4कार्डिनल बिन्दु वा नाजी सेनाको प्रतिनिधित्व।
के यो युरोप र अमेरिकाको सम्बन्धमा शब्द नाजी प्रयोग गर्न पागल छ? यस लेखमा Truthseeker1313 संघ बैंकिंग निगम महानिरीक्षक Farben मार्फत पढ्न मात्र बुश परिवार पनि कसरी नेदरल्यान्ड राजकुमार Bernhard KLM मार्फत नाजी luminaries सयौं को मोड मा एक प्रमुख भूमिका खेलेका बताउँछ, एडल्फ हिटलर आर्थिक सहायता। यसको लागि तिनीहरू डच रेड क्रसबाट यात्रा कागजात प्रयोग गर्थे। डच चिन्ता फिलिप्सले युद्धको समयमा गेसापोसँग तीव्रतासाथ काम गरे। तर यो भन्दा बढी यो प्रिन्स बर्नहार्ड वास्तवमा पहिलो पटक बेनलक्सको माध्यमबाट नाजी शासन जारी राख्न चाहिएको छ कि पढ्नका लागि पढ्नु हो। त्यसैले नेदरल्याण्ड नाजी शासनको अघोषित निरन्तरतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। बुश परिवारले फेरि फेरि पछाडि पसेको छ।
यदि तपाईं यो सबै विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने, म तपाईंलाई फेरि सम्झाउनेछु वास्तुकला। या तपाईं अझै पनि विश्वास छ कि यी निर्दोष छनौटहरू छन्? ठीक छ, त्यसपछि म आजका तथ्याङ्कहरू बुझ्न चाहन्छु। सुरू गर्न, यो पछि देखि देखाइएको छ कि कीवका स्निपर्स पश्चिम द्वारा संलग्न थिए। न केवल छविहरूको विश्लेषण पहिले नै यो प्रदर्शन, अब यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छ। Xander समाचार रिपोर्ट [उद्धरण] पोलिश स्रोतका अनुसार, वारसा सरकारले गोपनीय रूपमा स्नाइपरमा टाढा दाल सेक्टरको सदस्यहरूको ठूलो समूह र ग्यारिला रणनीतिहरूसँग कीवमा प्रदर्शनको सुरुवात अघि राम्ररी निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि यो फेब्रुअरीमा विक्टर युकुकोभिकको लोकतांत्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई पराजित गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यो पनि स्पष्ट थियो कि युरोप र अमेरिका खुल्ला रूपमा नव-नाजी विभाग समर्थित र वर्तमान (कूपन) सरकारमा शासन परिवर्तनको लागि प्रयोग भएको छ।
यदि तपाइँ वेबसाइटको लागि अब धेरै पाठ फेला पार्नुहुन्छ भने तपाइँ पनि सामेल हुन सक्नुहुनेछ यो लेख नेदरल्यान्ड्स र युरोपसँग कसरी नाजुक छ intertwined कसरी खोज्न सुरु गर्नुहोस्। एक विशेष विवरण यो प्रिंस बर्नहेर्डको उपनाम थियो 'एजेंट सुन्तला'। ट्रुट्ससेकरले यस लेखलाई देखाउँछ कि यो उत्पादन डच कम्पनी फिलिप्स दूपरद्वारा विकसित भएको थियो जुन फिलिप्सका लागि उभिएको छ। Dutch Pharmaceuticals। यदि तपाईंले सानो ध्यान दिनुभएको छ भने, तपाईं यो उत्पादन भियतनाममा लड्न वियतनाममा प्रयोग भएको थियो र हजारौँ मृत्युको कारणले थाहा पाईयो। पछि यो उत्पादन सम्भवतः कम्पनी मोन्सोन्टो द्वारा लिइएको थियो, जसले यसलाई नाम दिए उपहारहरूको लागि राउन्डअप र खेती मा एक कीटनाशक को रूपमा प्रयोग गरेर। विकिपीडियामा तपाईले अवश्य भेट्टाउन सक्नुहुनेछ कि यस उत्पादन मूलतः नीदरल्याण्डबाट आउछ।
मोन्सोन्टोको पुल पनि धेरै रोचक छ, किनभने यो कम्पनीले हालै निजी सर्टिफिकेट सेना अकादमी खरीद्यो। अकादमी कम्पनीको नामकरण गर्ने कम्पनीको नामकरण गरिएको छ कालो पानी लाई भनिन्छ। ब्ल्याक वाटर लोगोले एक भालू प्वाल र यस क्षेत्रको चिन्ह लगाउनुभयो Schwarzwasser। किनभने यो अत्यन्तै स्पष्ट थियो कि यस भाडा सेना को नाम स्विस शहर स्वरजस्सर देखि व्युत्पन्न भएको थियो, यो नाम अकादमी मा बदलिएको छ।
स्विट्जरल्याण्डको अक्को (मई 1291) पतन पछि यरूशलेमको वरिपरि शूरवीर टमप्परको अन्तिम गठबन्धन थियो। तिनीहरू स्विट्जरल्याण्डमा बसे। यी टम्प्लारहरू फेरि मालटिज आदेशसँग जोड्न सकिन्छ जसको प्रिंस बर्नहेर्ड र राजकुमारी बिटरिक्स सदस्य हुन्। टेम्पलहरू थिए, जस्तै थिए, भाडा सेना। र उनीहरूको रातो ढालका साथ माल्टा अर्डर मार्फत (जहाँ परिवारको नाम 'रूथस्लिल्ड' बाट आएको छ) हामी नाजियहरुको साथ समाप्त भएको छ, किनकि पैसा सृजन प्रक्रिया को आधार मा (दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान पनि) तपाईं सधैं रूथस्लिल्ड परिवारको नाममा आउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ पनि यो पत्ता लगाउनुहुन्छ प्रिंस फिलिप इङ्गल्याण्ड, राजकुमार Bernhard, नाजी जरा संग एक जर्मन जस्तै सबै लुकेका र देखिने संकेत गणना जाने, तपाईं नाजी शासन उठाएर कहिल्यै थियो कि अप्रिय निष्कर्षमा आउन सक्छ। यो छ कि रूसीहरूले एडल्फ हिटलरलाई यस्तो ठूलो झटका दिएका छन्, तर यसको सम्पूर्ण चित्र अमेरिका नाजिसको योटोबाट उद्धारकर्ताको रूपमा सही छैन, यदि तपाईंले देख्नुहुन्छ कि तिनीहरू पनि फाइनान्सियर्स थिए र नीदरल्याण्ड र इङ्गल्याण्डलाई रेजिनमा ठूलो औँलो थियो। नाजी शासन द्वितीय विश्वयुद्ध पछि स्थिरता जारी भएको छ र अहिले सेट अप गर्दै छ। तपाईंलाई चेतावनी दिइएको छ।
स्रोत लिङ्क सूची: Truthseeker1313.com, प्राकृतिक archbolg, e-architect.co.uk, Xander समाचार, WebUrbanist.com, one-evil.org
megalithic संरचना र Eurocentric प्रतिमान को डेटिंग (भिडियो!)
प्रणाली दिँदै 1 को अनुहार - भाग 2
प्रणाली दिँदै2को अनुहार - भाग 2
ट्याग: अर्थ, उदारीकरण दिवस, विशेष, मनाउनुहोस्
« टीटीआईपी सम्झौताले गैर-लोकतान्त्रिक युरोप र अमेरिकाको हिसाब साबित गर्दछ
सीरियामा युद्ध र आगो वा 'मित्रता' विश्व युद्ध »
कुल भ्रमण: 14.047.825